फोहोर गर्ने दलहरु, सफा गर्दै पत्रकार, सफा र समृद्ध शहरको यही हो सार ? – Arthatantra.com
फोहोर गर्ने दलहरु, सफा गर्दै पत्रकार, सफा र समृद्ध शहरको यही हो सार ?
यो अभियानमा उनीहरुले चरिकोटवासीलाई पनि सामेल गरिरहेका छन् । यसलाई चरिकोटवासीले खुलेरै प्रसंसा गरेका छन् । खतिवडा नागरिक दैनिकमा कार्यरत छन् भने मास्के नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा कार्यरत छन् । बजार सफा र स्वच्छ राख्न बजारवासीलाई सहयोग गर्न दुवै पत्रकारले अनुरोध गर्दै आफ्नो टोलमा प्रत्येक शनिबार सरसफाइ गर्ने बताएका छन् । – रासस
१५०० बाट तल झर्यो नेप्से,बजारमा ९ अंकको गिरावट काठमाडौ । साताको चौथो दिन बुधबार सेयर बजार नौ अंकले घटेर १४९३.२० अंकमा कायम भएको छ । […]
बाणिज्य बैंक समूह घटेपनि नेप्से ७ अंकमाथि बढ्यो काठमाडौ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा हरियाली छाएको छ । बजारमा […]